HGH ထိုင်း - ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
ကြီးထွားဟော်မုန်း (ကြီးထွားဟော်မုန်း, GH, HGH, somatotropin, somatropin) - အားကစားအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ anterior pituitary, တစ်ဦး peptide ဟော်မုန်း ကြွက်သားကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်။ (။ လက်တင် Soma ကနေ - ခန္ဓာကိုယ်) ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းဒါမှမဟုတ် somatotropin ကြောင့်လူငယ်များအဘို့အ၎င်း၏အမည်ကိုတယ်, ဒါကြောင့် (အရှည်) linear အတွက်သိသိသာသာအရှိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တိုးတက်မှုနှုန်းအဓိကအားဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါ၏ရှည်လျားသောအရိုးကြီးထွားမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါထိပ် / ml ng 1-5 နှင့်ပင် 10 မှထမြောက်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်သွေးထဲတွင်ကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အခြေခံအာရုံစူးစိုက်မှု, ml / 20-45 ng ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး 1956 အတွက်အထီးကျန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ hypothalamus ကနေအချက်ပြတုန့်ပြန် pituitary gland အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းထွက်လာတယ်။ အများအားဖြင့်, အနှစ်နှစ်ဆယ်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြီးထွားဟော်မုန်းများလွှတ်ပေးရေးနှုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, 20 နှစ်ကြာသည် 10 နှစ်ပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏အဆင့် 15% တို့ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ဒါကသူ့ရဲ့အဆင့်ကိုယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ညီမျှသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏အသုံးပြုမှု, VADO (ကမ္ဘာကြီး Anti-Doping အဖွဲ့အစည်း) ပိတ်ပင်ထားကြောင်း, ထိုအချက်ကိုနေသော်လည်း HGH ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ အတွက်ရရှိနိုင်ပါ ထုိင္းႏုိင္ငံ.
HGH ၏ Pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများ:
- ဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှု - ကြွက်သားကြီးထွားဖြစ်ပေါ်စေသည်
- Anti-catabolic အရေးယူ - ကြွက်သားပျက်ပြားဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်
- rejuvenation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း
- စိတ်ကြွဆေးပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပြန်လည်ကြီးထွား (အသက်နှင့်အတူ atrophied)
- အရိုးကြီးထွားစေတယ်နှင့် 26 နှစ်ပေါင်း (တိုးတက်မှု၏ဒေသများ၏ပိတ်သိမ်းသည်အထိ) မှတက်လူငယ်များအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုတိုးပွါး, အရိုးခိုင်မာစေ
မူးယစ်ဆေးသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့သက်ရောက်မှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအသည်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်း၏အရေးယူမှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက် IGF-1 (ယခင်ကကြောင့် somatomedin ကို C ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်), ကကမကထပြုခဲ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အချို့ အများဆုံးပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကြီးထွား။ အားလုံးနီးပါး IGF-1 ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆက်စပ်အားကစားအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု၏။
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။ ဒါဟာအခြေခံနှင့် Secret ၏ထိပ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အလွှဲခွင်အဖြစ်လျှော့ချကြသူ, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်း၏တစ်ဦးကအခြေခံအဆင့်, teenagehood ၏ကာလတစ်လျင်မြန်စွာ linear ကြီးထွားအဖြစ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းစဉ်အတွင်းအများဆုံး Secret ၏လွှဲခွင်ထိပ်အစောပိုင်းကလေးဘဝအတွက်အကျယ်ချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms:
အခါအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နှင့် (များသောအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတိုင်း 3-5 နာရီဖြစ်ပေါ်) ကိုတစ်နေ့တာအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ထိပ်ရှိကြောင်းကြီးထွားဟော်မုန်းနှင့်အခြားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်တစ်နာရီခန့်အိပ်ပျော်ကျသွားပြီးနောက်, ညဉျ့အခြိနျ၌လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။
အစပိုင်းမှာ, ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆေးပညာဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့စတင်ခဲ့သို့သော်နီးပါးတစ်ချိန်တည်းမှာဒီဟော်မုန်းကြောင့်အကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချရန်၎င်း၏စွမ်းရည်, အားကစားအတွက်ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး pituitary အလောင်းတွေခဲ့, သာ 1981 အတွက် HGH ၏ပထမဦးဆုံးပြင်ဆင်မှုတစ် recombinant မူးယစ်ဆေး somatotropin ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
1989 ခုနှစ်, bovine ကြီးထွားဟော်မုန်းအိုလံပစ်ကော်မတီတို့ကပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ အားကစားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းများ၏အသုံးပြုမှုအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ထဲမှာ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရောင်းအားအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တခြားဟိုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရဲ့ရှိရာအထူးသဖြင့်ကာယဗလအတွက်အားကစားအတွက်အသုံးပြုအဓိကအား, ကြီးထွားဟော်မုန်း, ။
အားကစားအတွက် HGH ၏လူကြိုက်များများအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လေ့လာမှုများကြီးထွားဟော်မုန်းယူပြီး, ပိန်ကြွက်သားထုထည်တိုးလာဆက်တစ်ရှူးများနှင့်အရည်များစုစည်းနေခြင်းကြောင့်ကြွက်သားဆဲလ်၏အသံအတိုးအကျယ်တိုးမြှင့်ဖို့ဦးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏နောက်ထပ်အသုံးဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ဒဏ်ရာ၏ကြိမ်နှုန်းလျော့ကျသွားသည်။ ဒါဟာအရိုးနှင့်ဆက် (ရွတ်, အရိုးနု) တစ်ရှူးကိုခိုင်ခံ့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းဒဏ်ရာပြီးနောက်အနာပျောက်စေသောအများနှင့်တစ်သျှူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး accelerates ။
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုအတွက်အဲဒါကိုပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်မဟုတျကွောငျးတှေ့ရှိခဲ့စဉ်ကတည်းကအလေးမအားကစားအတွက် HGH ၏အသုံးပြုမှု, အဓိပ္ပာယ်မဲ့ကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။ Somatotropin လည်းရှိရာထိုအညွှန်းကိန်းလုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏တံခါးခုံတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှေးကွေးဒါကြောင့်ကြီးထွားဟော်မုန်း, ထိုကဲ့သို့သောအားကစားအားကစားသမားများအတွက်အသုံးများမှာတိုးပွားစေပါသည်။
မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အနိမ့်ဖြစ်ပွားမှု, မူးယစ်ဆေးလိင်တံ၏ function ကိုမထိခိုက်ပါဘူးနှင့်အာနိသင်အန်ဒရိုဂျင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမစုစုပေါင်းအလေးချိန်တစ်ဦးသည်လစဉ်မှုနှုန်းအနည်းငယ် (3-4 ကီလိုဂရမ်) တိုးမြှင့်ခြင်း, ပြီးနောက်ရာခိုင်နှုန်းမလိုအပ်ပါဘူး အားလုံးပြောင်းလဲမှုမှာအချို့ကိစ္စမဆီကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်သင်တန်းနှုန်းတထောင် 2-3 အကြောင်းကိုဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
HGH လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်သောကြောင့်, HGH ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြီးထွားဟော်မုန်းပညာရှင်တွေရဲ့အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောထက်ကိုထောက်ခံအုကူံနှင့်ကြာကြာအချိန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများများတွင်အသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားကိစ္စများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်အတွက်, လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း (ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်း) ၏အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်:
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း syndrome ရောဂါ စှနျးအတွက်နာကျင်မှုနဲ့ထုံများကထင်ရှားနေသည်။ ဒါကကြွက်သားတွေတိုးလာပမာဏဟာရံအာရုံကြောချုံ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်မဖြစ်နှင့်လျင်မြန်စွာဆေးထိုးလျှော့ချပြီးနောက်ပြေလည်ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်, ခဲတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏စုဆောင်းခြင်းအရည်၏စုဆောင်းခြင်းသူတို့ကိုကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့် elasticity ပေးခြင်း, ကြွက်သား၌တည်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား, အထွေထွေမှာတော့သင်တန်း၏အဆုံးပြီးနောက်အနည်းဆုံးမကောင်းသောအကြံအစည်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။
သွေးတိုး - HGH ၏ဆေးထိုး၏လျှော့ချရေး, ဒါမှမဟုတ် antihypertensive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏တားစီး - ညှဉျးဆဲခွငျးလည်းနိမ့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ပါသည်, သူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြမထားဘူး။ ယင်း၏ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်သံသရာ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင်တစ်နေ့လျှင် 25 mcg တစ်ထိုးမှာ Thyroxin အသုံးပြုသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများပြတ်တောက်ပြီးနောက်, သိုင်းရွိုက် function ကိုအပြည့်အဝပွနျပေးရသည်။
Hyperglycemia - သွေးထဲမှာဂလူးကို့စအဆင့်တိုး။ အင်ဆူလင်သို့မဟုတ်ပန်ကရိယ (gliclazide) လှုံ့ဆော်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဖျက်သိမ်း။ များသောအားဖြင့်အပိုဆောင်းအစီအမံလိုအပ်နှင့်အပြည့်အဝ Reversible လုပ်မထားဘူး။ သင်တို့သည်လည်းသူကအင်ဆူလင် Sensitivity ကိုပြုပြင်, alpha lipoic အက်ဆစ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
Acromegaly - ရောဂါတိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးသိသာအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။ မှန်ကန်စွာလျှောက်ထားသည့်အခါတွေ့ရှိရသည်မဟုတ်။
စိတျနှလုံးနှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ Hypertrophy သာကြီးမားသောဆေးများအတွက် HGH ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကို၏အမှု၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာလျှောက်ထားသည့်အခါတွေ့ရှိရသည်မဟုတ်။
ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာတစ်ခုတိုး - ကကျယ်ပြန့်ကြီးထွားဟော်မုန်းကြောင့်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ (အူများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ IGF-1 များအတွက် receptors များကဲ့သို့) ၏ hyperplasia ဖို့ဝမ်းဗိုက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမသို့သော်ဤအချက်ကိုသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား, ကသူနဲ့ဆက်စပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလ၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဝမ်းဗိုက်၏ပြောင်းလဲမှုများတောက်ပဥပမာလက်ရှိရှိပါသည်။ သို့သော်အများဆုံးအားကစားသမား၏လက်တွေ့ကျတဲ့အတှေ့အကွုံကြီးထွားဟော်မုန်း၏ဂန္သင်တန်းများဝမ်းဗိုက်၏ကြီးထွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးကြောင်းပြသထားတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကပမာဏ၏စားသုံးမှုနှင့်အတူ, (အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်အင်တာနက်ဘုံဟူသောဝေါဟာရကို "GH အူ" ၌) ကိုဝမ်းဗိုက်၏ပျတိုးအများအပြားမှာသဘာဝဓာတုသက်ရောက်မှုရှိပြီးအင်ဆူလင်, steroids နှင့်အတူပေါင်းစပ် GH ၏ကြီးမားသောဆေးများသုံးတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ကြောင်းယုံကြည် အစားအစာ၏။
လိင်တံ၏အာနိသင်နှင့် function ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှု - HGH လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုမအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ၏နှိမ်နင်းရေး - ပါမောက္ခအဲလ်အမ် Cranton, MD ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်ခဲ့သည့်ထက်ပို 100 လူနာအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှု, ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖိနှိပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကင်ဆာ - တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းအကျိတ်ဆဲလ်များ၏ဌာနခွဲတစ်ခုသိသိသာသာအရှိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါကြောင့်သုတေသီကြွက်သားဖို့ကြီးထွားဟော်မုန်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်း, သူတို့ကစာရင်းအင်းကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကင်ဆာသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စကားပွောနိုငျသောလူဦးရေ၏ကျန်ကနေမတူညီတဲ့မဟုတ် neoplastic ဖြစ်စဉ်များ၏ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ကုသလူတွေတက်ရောက်ခဲ့သည့်တစ်ဦးနောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှုရှိခဲ့သည်။
အလယ်အလတ်ဆေးများအတွက်လျှောက်ထားလျှင်ကြီးထွားဟော်မုန်းခဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အားလုံးနီးပါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Reversible လုပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း HGH ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်လာဖို့ခန္ဓာကိုယ်နုပျိုမကောင်းတဲ့လက်စထရောကိုလျှော့ချ, အရေပြားတိုးတက်ရန်, အရိုးနှင့်အရွတ်များနှင့်များစွာသောအခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားကောင်းလာစေရန်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ၏အဓိကအားပြိုင်မှု - ထို pituitary ၏ပေါ်တယ်သွေးပြန်ကြောသို့ hypothalamus ၏ neurosecretory ဆဲလ်များကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့ somatotrope အပေါ်တိုက်ရိုက်ပြုမူသော hypothalamus (somatostatin နှင့် somatoliberin) ၏ peptide ဟော်မုန်း။ သို့သော်ဤဟော်မုန်းများနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်အပေါ်ချိန်ခွင်လျှာအများအပြားဇီဝကမ္မအချက်များကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်အဆင့်ဟော်မုန်းနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ, 3-5 အဆတိုးနိုင်ထင်ရှားပြကြပြီ။
Peptides ကြီးထွားဟော်မုန်း၏အများဆုံးဖြစ်ပွား stimulators ကိုဖြစ်ကြသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညီမျှသောသင်တန်း၏အာရုံစူးစိုက်မှု 7-15 ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်:
HGH Frag (176-191) - အပိုင်းအစ
Peptides အဘယ်သူ၏မော်လီကျူးတစ်ခုကွင်းဆက် peptide (ကြားတွင်) ငွေချေးစာချုပ်ထဲမှာနှင့်ဆက်စပ်α-အမိုင်နိုအက်ဆစ်များအကြွင်းအကျန်ကနေတည်ဆောက်ထားကြသည်တ္ထုများ၏မိသားစု - (။ - အာဟာရဂရိπεπτοςထံမှ) ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် - သူတို့က Monomeric ယူနစ်သောင်းချီ, ရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာင်သည့်သဘာဝသို့မဟုတ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာအတန်းအစားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစည်းမျဉ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးပါဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း၏ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက်အားကစားများတွင်အသုံးပြုကြသည်သူတို့သာ peptides စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ်စျေးကွက်အပေါ်များစွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ပို. ပို. မကြာခဏကြီးထွားဟော်မုန်း၏စိတ်ကြွဆေးနေသော peptides, ရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကာယဗလအတွက်ရေပန်းအစားဆုံး peptides:
Ghrelin (GHRP) ၏အုပ်စုတစုမှ: (မသက်ဆိုင်ဘဲမူလတစ်နေ့တာ၏အချိန်နှင့်သွေးထဲတွင် somatostatin ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ချက်ချင်းဆေးထိုးပြီးနောက်အသံထွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုဖန်တီး) ။
GHRP-6 နှင့် Hexarelin
(ကိုယ်ခန္ဓာ၌မိတ်ဆက်စကား GRS ၏သဘာဝ Secret သဘာဝစဉ်အတွင်း somatostatin လျှော့ချ, မြင့်ခဲ့ပါသည်အခါနာရီအတွင်းအားနည်းနေပါလိမ့်မည်သည့်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုလှိုင်းကဲ့သို့တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်: ဟော်မုန်း (GHRH) ထုတ်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏အုပ်စုအနေဖြင့် ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (ဥပမာညဉ့်နေစဉ်အတွင်း) ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုး။ တစ်နည်း GHRH သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုကွေးနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ, GRS ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးပွားစေပါသည်။ )
HGH Frag (176-191) ကြီးထွားဟော်မုန်းတစ်ခုအပိုင်းအစ (အဆီ burner) ဖြစ်ပါသည်
အတော်များများကမေးခွန်းများကိုအတုလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းရှိလျှင်အဘယ်ကြောင့်အသစ်တစ်ခု peptide ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးပျေါလာသလဲ အဖြေရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: peptide စိတ်ကြွဆေးအများအပြားဆွဲဆောင်မှုအားသာချက်များရှိသည်။
Peptides ကြီးထွားဟော်မုန်းထက်သိသိသာသာစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူသင်တန်း၏ကုန်ကျစရိတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအောက်ပိုင်းရှိလိမ့်မည်။
အရေးယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောယန္တယားများနှင့်ဝက်ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးဟိုတုန့်ပြန်များအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကွေး manipulate ခွင့်ပြုသည်။
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, သငျသညျသူတို့အားသို့မဟုတ်အခြားတ္ထုများမှ preference ကိုပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းမှာလုံခြုံဒါယခုအချိန်တွင် peptides ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး, ပညတ်တရားအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားပါ။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံးဝဖျက်သိမ်းဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်မှု doping အဘို့အဘယ်သူမျှမကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိသေး၏။
Peptides အဖြစ်ဂန္ကြီးထွားဟော်မုန်းစစ်မှန်မှုအတွက်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအပြီးပလာစမာထဲမှာ somatotropin များ၏အဆင့်တွင်စစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါပဲ။
ဤသင်တန်းများကြီးထွားဟော်မုန်း fit သလော
ကြီးထွားဟော်မုန်းဟာ musculature ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအားဖြည့်ရန် (ထိုထက်ပိုသောလူငယ်များအရိုးအချိုးမညီဖှံ့ဖွိုးတိုးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါသည်) 20 နှစ်ပေါင်းအသက်ကျော်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်, ဒီကြီးမား၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပျက်စုစုပေါင်းဒြပ်ထုတိုး အဆီဆုံးရှုံးမှု။
အဆိုပါသင်တန်းကို (လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကြောင့်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ) ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက် contraindicated (တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းဟာသွေးထဲမှာဂလူးကို့စပမာဏကိုတိုးပွါး), သတိပြုဖို့လိုသွေးတိုးရောဂါအတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးမသုံးမီသင်ကဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရပေမည်။
ထိုင်းထိပ်တန်း3လူကြိုက်များ HGH